ड्रग्ससँग साटिन्छ जवानी - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
मोडल: उमा बुढाथोकी र निशान श्रेष्ठ तस्विर : महेश प्रधान/साप्ताहिक
ड्रग्ससँग साटिन्छ जवानी
कोटेश्वर, जडीबुटीमा डेरा गरी बस्दै आएकी २४ वर्षीया रश्मि (नाम परिवर्तन) ले सिरिन्जबाट ड्रग्स लिन थालेको पाँच वर्ष भयो । आफूले थाहा पाउँदा सडकमा रहेकी रश्मि सुरुमा डेण्ड्राइफ सुँघ्थिन् । बिस्तारै ठूली हुँदै जाँदा चुरोटको लत लाग्यो, अनि गाँजा, भाङ हुँदै अहिले उनी सिरिन्जको माध्यमबाट लिने ड्रग्समा पुगेकी छिन् । नियमित रूपमा ड्रग्स लिनुपर्ने बाध्यता छ उनलाई, तर खास पेसा भने केही पनि छैन । पेसा नभएपछि उनको त्यो बाध्यता पूरा गर्न जसले ड्रग्स दिन्छ उनी उसैसँग यौनसम्पर्क राख्छिन् । रश्मि ड्रग्स किन्न जसले पैसा दिन्छ उसैसँग यौन साट्न पनि पछि पर्दिनन्, तर उनका अधिकांश यौन साथी उनीजस्तै ड्रग्स युजर हुन् ।
नेपाली समाजमा अचम्म लाग्ने अर्को जोडी हो, कोटेश्वर नै बस्दै आएकी २६ वर्षीया आरती (नाम परिवर्तन) र उनका श्रीमान् अजित (नाम परिवर्तन) । यी दुवै ड्रग्स युजर हुन् । उनीहरूको देखिने खालको कुनै व्यवसाय छैन । आरती भन्छिन्– हामी बेरोजगार हौं । आफ्ना लागि त आरतीले ड्रग्सको जोहो त गर्छिन् नै, साथै श्रीमान्का लागि उनैले ड्रग्स जोहो गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि उनी जसले ड्रग्स दिन्छन् ऊसँग श्रीमान्को सहमतिमै यौनसम्पर्क गर्न तयार हुन्छिन् ।
रश्मि र आरती त ड्रग्ससँग यौन साट्न बाध्य दुई उदाहरण मात्र हुन् । उपत्यकामा यसरी ड्रग्स लिन यौन साट्ने महिलाहरूको संख्या ठूलो रहेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ महिना लगाएर यो अध्ययन गरेको हो । मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रले २०१६ मा सिरिन्जबाट लागूपदार्थ सेवन गर्ने महिलाहरूको सामाजिक तथा व्यक्तिगत आनीबानीका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा संलग्नमध्ये १७ प्रतिशत लागूऔषध सेवन गर्ने महिलाले लागूऔषध प्राप्त गर्न आफूहरू जो–कोहीसँग यौनसम्पर्क गर्ने खुलेर जवाफ दिएको उल्लेख छ । ती १७ प्रतिशतमध्ये १ सय २८ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता महिलाले आफ्ना नियमित यौन साथी पनि रहेको बताएका थिए । त्यसमा कसैले जीवनसाथी नै यौनसाथी रहेको बताएका थिए भने कतिपयले लागूऔषधसँग यौन साट्ने कुरा बताएको अध्ययनको नेतृत्व गरेका सुदीपराज खतिवडा बताउँछन् ।
अध्ययनको अर्को जोखिमको पाटो के थियो भने ड्रग्सका लागि पैसा वा ड्रग्स नै लिएर यौनसम्पर्क गर्नेमध्ये ५८ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र कन्डम लगाएर यौनसम्पर्क गरेको पाइएको छ, जसमा ४१ दशमलव ७ प्रतिशत महिलाले भने बिनाकन्डम नै यौनसम्पर्क गर्ने गरेको बताएका छन् । यसरी कन्डम नै नलगाई यौनसम्पर्क गर्दा उनीहरू सधैं यौनरोगको जोखिममा रहने खतिवडा बताउँछन् । ‘एक त सिरिन्जबाट लागूऔषध प्रयोग गर्दा यौन रोगको जोखिम छँदै छ ।’ खतिवडा भन्छन्– त्यसमाथि धेरै यौनसाथी भएकाहरू कन्डमबिनै यौनसम्पर्क गर्दा उच्च जोखिममा छन् ।
अझ पत्याउन गार्‍हो पर्छ, तर यथार्थ कुरा हो, लागूऔषधको नशामा फसेका अधिकांश महिला १५ वर्ष पनि नपुगी यौनसम्पर्कमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसमा कतिपय रहरले पुगेका छन् भने कतिपयले बाध्य भएर अनैतिक यौनसम्पर्कमा पुग्नुपरेको छ । सडकमै हुँदा आफूलाई फकाएर पहिलो पटक एउटा अधबैंसे मानिसले १४ वर्षको उमेरमा यौनसम्पर्क राखेको रश्मि बताउँछिन् । सडकमा बास हुँदा खान दिने कोही थिएन, सधै त्यही बाटो भएर हिँड्ने एउटा २८/३० वर्षको मानिसले खाना ख्वाउँछु भनेर लग्यो अनि यौन प्रस्ताव राख्यो । उनले भनिन्– दुई–चार दिन खाना ख्वायो, जोबन पनि लुट्यो । पछि आउन पनि छाड्यो अनि मैले आफैंले जिउनका लागि त्यसैलाई व्यवसाय बनाए । त्यतिबेला आफू चुरोटको लतमा भएको उनी बताउँछिन् । यौन व्यवसायमा फसेसँगै बिस्तारै चुरोट हुँदै गाँजा अनि अहिले सिरिन्जको माध्यमबाट ड्रग्सको नसामा पुगेको रश्मिले बताइन् । अध्ययनले पनि लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू १५ वर्ष पनि नपुगी बलात्कारको सिकार भएको देखाएको छ, जसको संख्या ३० प्रतिशत छ । सानैमा बलात्कारको सिकार भएका कारण कतिपयले पछि त्यसैलाई व्यवसाय बनाएको पाइन्छ भने कतिपय जीवनदेखि दिग्दार भै लागूपदार्थ दुव्र्यसनी भएको पाइएको खतिवडा बताउँछन् ।
सरकारले गरेको एकीकृत जैविक तथा व्यवहारिक सर्भेमा संलग्नमध्ये सिरिन्जमार्फत ड्रग्स प्रयोग गर्ने ८९ प्रतिशतले पछिल्लो एक वर्षभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी मानिससँग यौनसम्बन्ध राखेको बताएका थिए । कुराकानीका क्रममा एक जनाले मात्र सधैं ड्रग्स उपलब्ध गराउन नसक्ने हुँदा धेरै जनासँग यौन सम्पर्क गर्न आफूहरू बाध्य भएको धेरैले बताएका थिए । त्यसरी धेरै जनासँग यौनसम्पर्क गर्दा आफूहरूको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिमलाई ख्याल नगरिएको पाइएको थियो । जथाभावी यौनसम्पर्क राख्ने र धेरै जनासँग सिरिन्ज साट्दा एचआईभी एड्स, हेपाटाइटीस बी, सीजस्ता यौनजन्य संक्रमणहरूको जोखिम उच्च रहने राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. तरुण पौड्याल बताउँछन् । धेरै जनासँग यौनसम्पर्क राख्ने जो कोही पनि यौन जन्य रोगको उच्च जोखिममा हुन्छ । डा. पौड्याल भन्छन्, अझ उनीहरू त सिरिन्जबाट पनि रगतको संक्रमण हुने जोखिममा हुन्छन् । यसरी जथाभावी यौनसम्पर्क गर्ने दुव्यसनीहरूमध्ये धेरैलाई यौनरोगका बारेमा जानकारी भए पनि वास्ता नगरेको पाइएको थियो ।
२० वर्षदेखि २४ वर्षका दुव्र्यसनी बढी
उपत्यकामा सिरिन्जबाट लागूपदार्थ प्रयोग गर्नेमा १५ वर्षदेखि ३९ वर्षसम्मका महिला रहेको अनुसन्धानमा संलग्नहरूको दाबी छ, जसमा २० वर्षमुनिका २ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा बढी २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका छन् । लागूपदार्थ सेवन गर्नेमा उक्त उमेर समूहका ३९ प्रतिशत छन् भने २५ देखि २९ वर्षका १९ प्रतिशत तथा ३० देखि ३५ वर्षका १५ प्रतिशत अनि ३५ देखि ३९ वर्षका ६ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सुईबाट लागूऔषध लिनेमध्ये ५९ प्रतिशतले आफू २० वर्ष नै नपुगी लागूऔषध लिन थालेको बताएका छन् । उनीहरूमध्ये १६ प्रतिशतले दुई वा दुईभन्दा बढीसँग सुई साटासट गर्ने जानकारीसमेत दिएको सर्वेक्षक खतिवडाको भनाइ छ । त्यसमा ६ प्रतिशतले नजिकका मानिस वा नातेदारले पहिले नै प्रयोग गरिसकेको सुई लगाउने तथा ९ प्रतिशतले यौन साथीसँग सिरिन्ज साट्ने गरेको बताएका थिए ।
२७ प्रतिशत प्लसटु माथिका
सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये उच्च शिक्षा पढेका (प्लस टु वा सोभन्दा माथि) २७ प्रतिशत महिलाले सुईबाट लागूऔषध सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ । उच्च घरानका कतिपय महिलाहरू पनि यस्तो संगतमा फसेको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख एसएसपी धीरु बस्न्यात बताउँछन् । घरेलु हिंसामा परेर घरपरिवार छोडेका, साथीभाइको संगत, अध्ययनपछिको बेरोजगारी तथा नैराश्यताका कारण धेरै शिक्षित महिला यो दुव्र्यसनमा आएको बस्न्यात बताउँछन् । अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी माध्यमिक तह अध्ययन गरेका महिला यस्तो कार्यमा संलग्न छन् । सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार माध्यमिक तह अध्ययन गरेका ४९ प्रतिशत महिला दुव्र्यसनमा संलग्न छन् । माध्यमिक तह वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेकाहरूले पनि सुईबाट लागूऔषध लिने तथ्यले युवाहरू विशेष गरी टिनएजमै यो कुलतमा पर्न थालेको देखाउँछ । त्यस्ता दुव्र्यसनीमध्ये नपढेका ९ प्रतिशत, अक्षर मात्र चिनेका ३ प्रतिशत तथा प्राथमिक तह पढेका १२ प्रतिशत छन् ।
फ्ल्याटमा चल्छ यौन व्यवसाय
पोखरामा रहेका अधिकांश यौन व्यवसायीले आफ्नै छुट्टै कोठा वा घरको फ्ल्याट भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रले पोखरामा यौन व्यवसायमा संलग्न ३ सय ४२ जना यौनकर्मीमा गरेको सर्वेक्षणमा ६८ प्रतिशतले आफूहरूले आफ्नै निजी कोठामा ग्राहक ल्याउने कुरा बताएका थिए । उनीहरूले आफ्ना केही नियमित ग्राहक भएको र केही आफैं खोज्दै आउने जवाफ दिएको सर्वेक्षणका कोर्डिनेटर साइपाल नेपालका कार्यक्रम निर्देशक पवन अधिकारी बताउँछन् । १६ देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका यौन व्यवसायीमा गरिएको उक्त अध्ययनमा आधाभन्दा बढीले आफू अविवाहित भएको उत्तर दिएका थिए, जसमा ४८ प्रतिशतले विवाह गरेको तर सम्बन्धमा नरहेको बताएका थिए । सम्बन्धमा नरहेकाहरूमध्ये पनि ११ प्रतिशतले सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको जानकारी दिए ।
यौन व्यवसायमा संलग्नमध्ये ९० प्रतिशत शिक्षित छन् । उनीहरूले आफूलाई यौनरोगका बारेमा जानकारी रहेको बताएका छन्, तर यौनसम्पर्कका बखत कन्डम प्रयोग गर्ने आधाभन्दा केही बढी मात्र छन् । नियमित यौनसम्पर्कमा कन्डम प्रयोग गर्नेहरूको संख्या ५२ प्रतिशत छ भने ४२ प्रतिशतले चिनेजानेको वा नियमित यौन साथीसँग यौनसम्पर्क गर्ने कन्डम प्रयोग नगर्ने बताएका थिए । पोखरामा यौन व्यवसायमा संलग्न महिलामध्ये २६ प्रतिशत नयाँ यौन व्यवसायी थपिएको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७४ प्रतिशतले आफूहरू दुई वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै यो व्यवसायमा संलग्न रहेको बताएका थिए ।
व्यवसायमा संलग्न अधिकांश महिलाले आफ्नो पहिलो यौनसम्बन्ध आफू २० वर्ष पुग्नुअघि भएको जवाफ दिएका थिए । यसरी २० वर्षभन्दा पहिले नै यौनसम्पर्क भएको बताउनेमा ३ सय १ जना (८८ प्रतिशत) महिला थिए । उनीहरूले दैनिक सरदर दुई जनासँग यौनसम्पर्क हुने बताएको अधिकारी बताउँछन् । यसरी दैनिक एकभन्दा बढी ग्राहकसँग यौनसम्पर्क गरे पनि आफैं कन्डम लिएर हिँड्ने महिलाहरूको संख्या निकै कम छ । ‘कन्डम लिएर हिँड्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ८० प्रतिशतले ‘बोक्छु’ भन्ने जवाफ दिए पनि देखाउन अनुरोध गर्दा २६ प्रतिशतले मात्र आफूसँग भएको कन्डम देखाउन सकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सरकारले राजमार्गमा हुने यौन गतिविधिको पनि सर्वेक्षण गरेको थियो, जसमा पछिल्ला ६ महिनामा पैसा लिएर यौनसम्पर्क गर्ने महिलाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको थियो । महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने २२ जिल्लामा गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा ६ सय ६० जना महिला यौनकर्मीको सहभागिता थियो । यौनकर्मी महिलामध्ये ६६ प्रतिशत ३४ वर्षमुनिका थिए भने ६७ प्रतिशत शिक्षित थिए । तीमध्ये अधिकांश माथिल्लो जातका भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश यौनकर्मी महिलाले आफू विवाहित भएको बताएका थिए । त्यसरी आफूलाई विवाहित बताउनेमा ७४ प्रतिशत महिला छन् । विवाहितमध्ये ८९ प्रतिशतले २० वर्ष पहिले नै आफूले विवाह गरेको बताएका छन् । महेन्द्र राजमार्ग छेउछाउ यौन व्यवसायमा संलग्न ९२ प्रतिशत महिलाले सन्तानसमेत जन्माएको बताएका छन् । त्यसमा एक चौथाइले विभिन्न कारणले आफ्नो एभोर्सन भएको बताए । २३ प्रतिशतले नचाहँदा–नचाहँदै बच्चा भएको उत्तर दिएका छन् भने ८२ प्रतिशतले आफूलाई अब बच्चा जन्माउन मन नभएको बताएका थिए । परिवार नियोजन र यौनरोगको सबैभन्दा भरपर्दो साधन कन्डम भएको जानकारी शतप्रतिशतलाई भए पनि ७० प्रतिशतले मात्र त्यसको प्रयोग गरेको पाइयो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रहेका अधिकांश यौनकर्मीले होटल तथा लजमा काम गरेको पाइन्छ, जसमध्ये ५४ प्रतिशतले आफ्नै घरमा वा व्यवस्थित तरिकाले कोठा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेका छन् भने बाँकीले अस्थायी स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेका छन्, जसको तीन चौथाइभन्दा बढी दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि यो पेसामा संलग्न छन् । उनीहरूका आधाभन्दा बढी (५२ प्रतिशत) ग्राहक ठूला व्यवसायी छन्, जो आफ्नै साधन वा रिजर्भ गरेर भाडाको साधन लिएर आउने उनीहरूले बताए । ४३ प्रतिशत भने बस, ट्रक तथा ट्यांकरमा काम गर्ने व्यक्ति एवं बाँकी थाहा नभएका ग्राहक भएको यौनकर्मीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा कति महिला लागूपदार्थको दुव्र्यसनमा छन् ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला तथा बालबालिकालाई नै जोखिममा परेको वर्गका रूपमा लिएको छ । सोही अनुरूप नेपालमा पनि यो वर्ग उच्च जोखीममै छ । लागूपदार्थ दुव्र्यसनीको संख्या हेर्दा नेपालमा जति दुव्र्यसनी छन् त्यसको ७ प्रतिशत महिला रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
- धीरु बस्न्यात
एसएसपी, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो
के कारणले उनीहरू दुव्र्यसनमा फस्न पुग्छन् ?
पहिलो कुरा हामीकहाँ यस विषयमा दिइने शिक्षा र चेतनाको कमी छ । कतिपय महिला घरेलु हिंसाका कारण, कतिपय महिला परिवार छोडेर अन्त बस्ने मात्र नभएर सडकमा पनि आइपुगेका छन् । उनीहरू आफ्नो मन भुलाउन यसमा फसेको देखिन्छ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भने बेरोजगार महिलालाई यो कुलतमा फसाउन सके यसको कारोबार गर्नेहरूले आफ्नो कारोबार बढाउन सहज हुने देखेर उनीहरूलाई अकर्षित गरेको पाइन्छ ।
दुव्र्यसनी महिलाहरूले लागूपदार्थ प्राप्त गर्नेे आयस्रोत कसरी जुटाउँछन् ?
हामीले पाएका केसहरू हेर्दा यसमा फसेका महिलाहरूको प्रमुख आर्थिक स्रोत प्रस्टिच्युसन (वेश्यावृत्ति) देखिएको छ । किनभने त्यहाँबाट सहज रूपमा पैसा आउँछ तर यो ज्यादै नराम्रो र जोखिमपूर्ण कार्य हो । कतिपय महिलाले चोरी तथा अपराधमा संलग्न भएर पनि आयस्रोत जुटाएको पाइन्छ । आपराधिक मनोवृत्ति भएका मानिसले यस्ता किसिमका महिलाबाट सूचना लिन सहज हुने हुँदा उनीहरूलाई प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ । कसैलाई अपहरण गर्नुपर्‍यो भने पनि यिनीहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ । बानी लागेपछि नखाइनहुने हुँदा उनीहरू जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
ड्रग्स युजर महिला नेपालमा कुन वर्गका बढी छन् ?
अहिलेसम्म यस किसिमको अध्ययन भएको छैन, तर त्यसको आवश्यकता अति जरुरी छ । हामीकहाँ आएका केसहरू हेर्दा विवाहित, अविवाहित तथा विद्यालय पढ्ने केटीहरू पनि छन् । धनाढ्य समुदायका महिलाहरू पनि छन् । लागूऔषधका कारोबारीहरूको लक्षित समूह भनेको नियमित पैसा तिर्न सक्ने व्यक्तिहरू नै हो । पैसाका लागि नै व्यापार गरिने हुँदा उनीहरूको लक्ष्य धनाढ्य परिवारकहाँ पुग्ने नै हुन्छ । उनीहरू त्यहाँ पुग्न सफल पनि भएको देखिन्छ । जुनसुकै शैक्षिक स्तरको मानिस पनि यसमा फसेको पाइन्छ । धेरै अशिक्षित छन् भने शिक्षित तथा सभ्रान्त परिवारका दुव्र्यसनी कस्तो हुँदो रहेछ चाखौं न त भन्ने भावनाबाट बिस्तारै दुव्र्यसनमा फसेको देखिन्छ ।
कुन अवस्थाबाट महिलाहरू लागूऔषध दुव्र्यसनसम्म आइपुग्दा रहेछन् ?
सुरुमा त खैनी, चुरोट हुँदै आएका पनि छन् । कतिपय सुरुमा औषधीय गुण भएका मनोदीप औषधीहरूको गलत प्रयोगबाट पनि आएका देखिन्छन् । कुनै पनि मानिस लागूऔषधमा फस्छ भने चुरोट, खैनी, रक्सीजस्ता कुनै न कुनै कुरा उसले प्रयोग गरिरहेको वा गरेको हुन्छ । उद्गम स्थान तिनै हुन्, कोही पनि एकैपटक लागूऔषध प्रयोगमा जाँदैनन् ।
महिला दुव्र्यसनीको संख्या कम गर्न के गर्नुपर्छ ?
रणनीतिक हिसाबले जाँदा शिक्षा र जनचेतनाको वृद्धि गर्नु नै पहिलो काम हो । त्यो काम घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ । घरका सदस्यहरूले चुरोट, रक्सी, खैनी तथा लागूऔषधजस्ता कुरा खानु हुँदैन, जसले गर्दा अरूले सिक्न नपाऊन् । त्यसपछि विद्यालय तथा समाज सचेत हुनुपर्छ । औषधी पसलबाट जथाभावी मनोदीप औषधीहरूको बिक्री–वितरण रोक्नुपर्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने लागूपदार्थ दुव्र्यसनीहरू अपराधी होइनन्, बिरामी हुन् । त्यसैले उनीहरूको उपचार त्यही हिसाबले गरिनुपर्छ ।
सुस्माको मस्त जवानी